Skyteam sy Star Alliance Airlines dia nanao sonia fifanarahana codeshare
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Skyteam sy Star Alliance Airlines dia nanao sonia fifanarahana codeshare
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Vaovao Mafana Rosia • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny olana momba ny sidina sy ny resaka politika dia mety nanaparitaka ny tsy fivadihan'i Aeroflot ho an'i Skyteam, ary i Lufthansa an'i Brussels Airlines ho an'ny Star Alliance.
Ity ve no fiandohan'ny fiaraha-miasa lehibe kokoa?
Araka ny fanambarana an-gazety navoakan'ny androany Aeroflot, ny Airline Rosiana ary Brussels Airlines dia nanao sonia fifanarahana codeshare hanomezana safidy ho an'ny mpanjifa sidina lehibe kokoa sy fahalalahana bebe kokoa rehefa mandeha eo anelanelan'i Bruxelles sy Moskoa. Ny tapakila ho an'ny sidina ao anatin'ny fifanarahana vaovao dia amidy, ary ny sidina iaraha-miasa dia manomboka amin'ny 20 Janoary 2020.
Miombon-kevitra ny mpitatitra saina Rosiana sy ny kaompaniam-pirenen'i Belzika mba hanome safidy bebe kokoa ho an'ny vahininy, noho ny fifanarahana codeshare vao napetraka. Azon'ny mpanjifa izao afaka mamandrika sidina miaraka amin'ny Aeroflot na Brussels Airlines ary mandeha eo anelanelan'ny Bruxelles sy Moskoa manomboka amin'ny 20 Janoary 2020.
Ny famandrihana sidina codeshare dia midika fa ny sidina voatokana miaraka amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka iray dia mety ho an'ny mpiara-miombon'antoka ambanin'ny fifanarahana no miasa. Io fifanarahana vaovao io dia ahafahan'ny mpandeha misidina avy any Moskoa mifandray mora amin'ny tambajotra Brussels Airlines iray manontolo, raha ireo mpizaha tany avy any Bruxelles kosa dia hahazo fifandraisana tsara kokoa amin'ny renivohitra Rosiana sy ireo zotram-piaramanidina Aeroflot manerantany. Misaotra ny 'through-check-in', ny mpandeha dia afaka manamarina ny entany any amin'ny seranam-piaramanidina fiaingany ary mamerina azy io amin'ny toerana nalehany farany.